🔥Methenolone (Primobolan): tombontsoa, ​​TPC ary tsingerina
Izany dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo steroid anabolika manana laza sy laza lehibe indrindra, indrindra eo amin'ireo atleta, noho ny toetra mampiavaka azy mifandraika amin'ny fitomboan'ny hozatra sy ny fandoroana tavy. Jereo eto ambany ny fampahalalana mahasoa rehetra momba ity vokatra ity ary hianaranao bebe kokoa momba ny anabolika ankafizin'i Master Arnold.
Primobolan dia anabolika izay manana toetra mampiavaka tena mahaliana indrindra indrindra noho ny risika kely mifandraika amin'ny fampiasana azy.
Izy io dia aseho amin'ny kinova am-bava sy amin'ny tsindrona azo tsindrona ary noho io antony io dia misy fahasamihafana eo amin'ny lafiny fampiasana sy ny mety hisian'ny protokoleta hafa tsy mitovy amin'ny vehivavy, noho ny toetra androgen ambany mifandraika amin'izany.
Ny fampiasana bebe kokoa dia mifandraika amin'ny dingana fanapahana, satria tsy zava-mahadomelina manana ny fitehirizana ny tsiranoka, mampitombo ny tosidra na karazana voka-dratsy hafa izay mifandraika amin'ny aromatization.
Ity dia zava-mahadomelina izay manana poizina ambany ary noho io antony io dia miteraka fahasimbana kely amin'ny vatana, na izany aza, toy ny karazana steroid anabolika hafa, Primobolan koa dia misy vokany eo amin'ny lahy sy ny vavy izay mampiasa azy amin'ny tsingerina iray.
Ny mampiavaka azy dia mahatonga azy io ho hormonina mampihetsi-po hampiasaina, na izany aza, tohizo ny famakiana mba hahalalanao izay rehetra momba an'io fanafody io, ny fomba fiasa, ny fampiasana azy amin'ny fomba mahazatra ary ny lafiny tafiditra amin'izany alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra maimaika.
Primobolan dia steroid anabolika izay novolavolaina tamin'ny taona 60 tany Alemana avy amin'ny orinasa mpamokatra fanafody Squibb ary namidy voalohany tamin'ny anarana hoe Methenolone.
Na izany aza, nahomby kokoa ny nomenclature Primobolan rehefa nampiasaina, noho izany, dia nitoetra ho lehibe mandra-pijanonan'ny famokarany.
Namboarina tamin'ny kinova roa izy io:
Fandikana am-bava miaraka amina estera acetate fohy
Fampidirana azo tsongaina miaraka amin'ny ester enanthate lava
Nisy fanandramana taty aoriana hivarotra ilay kinova tsindrona amin'ny endrika acetate, na izany aza, nijanona haingana ny famokarana noho ny lazan'ny ester lava lava be tsindrona.
Inona ny Primobolan?
Ity steroid anabolika ity dia ao anatin'ny fianakaviana derivative DHB (Dihydroboldenone), izay ny tanjona kendrena dia ny manatsara ny toetra anabolika nefa tsy mampitombo ny androgenika ny zava-mahadomelina ary koa mampihena ny risika ateraky ny poizina amin'ny atiny.
Tsy tafiditra ao amin'ny sokajy 17-AA anabolika (Alkylated Alpha), izay na ny metabolisma ao amin'ny atiny aza dia miseho amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba izay miteraka fahasimbana kely kokoa amin'ny taova ary raha ampitahaina amin'ny fanafody hafa dia misy poizina kely noho ny anabolika hafa na dia notantanana aza. amin'ny kinova am-bava.
Raha misy ifandraisany amin'ny fahafaha-mahazo tombony amin'ny hozatra dia azo lazaina fa antonony hatramin'ny ambany izy io, noho izany dia tsy fanafody azo raisina ho filamatra ao anaty protokolola mibontsina, ohatra.
Satria manana hery anabolika ambany izy io, ny lehilahy dia mety hahatsikaritra tombony ambany amin'ny fampiasana Primobolan, izay mety mahaliana kokoa amin'ny fampiasana vehivavy, satria izy io dia zavamananaina izay mora tohina kokoa amin'ny hormonina lahy.
Heverina ho toy ny anabolika anabolika kilasy 1 izy io, noho izany, midika izany fa ny famatorana azy dia miseho matanjaka kokoa ao amin'ny receptor androgen amin'ny vatana, izay miteraka fihenan'ny fahafaha-manatsara ny famaritana ny vatana sy ny tombom-barotra maina izay tsy misy fitehirizana rano hitazona.
Nandritra ny tsingerina natao tamin'ity steroid ity dia azo atao ny manentana ny fiovana lehibe, indrindra ny fifandraisan'ny proteinina amin'ny vatana, izay manatsara toetra maro amin'ny vatana, toy ny fanasitranana hozatra haingana kokoa.
Ho fanampin'izany, mandrisika ny hafainganam-pandehan'ny metabolisma izy io ary mahatonga ny vatana handany kaloria bebe kokoa amin'ny fomba tsotra, noho izany, dia ao anatin'ny sokajin'ny steroid anabolika izay mifanaraka indrindra amin'ny protokolota iray hitazomana ny hozatra ary koa ho an'ny dingana fanapahana.
Ny mety anabolika dia tsy avo, raha ampitahaina amin'ny steroid izay 17-AA toa an'i Stanozolol sy i Dianabol, amin'ity tranga ity dia maivana kokoa ny Primobolan ary manana tombony amin'ny hozatra izay miovaova arakaraka ny antonony sy ambany.
Noho izany, ny fampiasana azy dia miparitaka be kokoa amin'ny mpihaino vehivavy, izay mora tohina kokoa amin'ny homamiadana lahy.
Ny fampiasan'ny mpijery lehilahy dia fahita matetika mandritra ny vanim-potoana fanapahana, satria, amin'ity tranga ity, ny vokatra manohitra ny catabolic dia mahomby kokoa amin'ny fanaovana ny fikojakojana ny hozatra ho tsara kokoa ho an'ny tanjona kanto.
Ho fanampin'izany, satria karazana zava-mahadomelina izay manafaingana ny metabolisma, dia mahatonga ny vatana hihinana kaloria betsaka kokoa, amin'izay manome toerana tsara kokoa hampihenana ny isan-jaton'ny tavy ao amin'ny vatana.
Ny fahafaha-mampiasa ny Primobolan dia ny fampiasana synergy amin'ireo fanafody hafa izay anabolika kokoa, satria iray amin'ireo vokany mahasoa dia ny fampihenana ny mety ho aromatization amin'ny vatana.
Noho izany, rehefa ampifangaroina amin'ny zava-mahadomelina izay manana tombony lehibe azo hahazoana tombony hozatra dia manaporofo ny Primobolan fa mahomby kokoa amin'ny fandanjana ny tsingerina iray manontolo.
Rehefa ampiasain'ny mpanatrika vehivavy, ity steroid anabolika anabolika ity dia tsy mampiseho fahaiza-manao lehibe amin'ny masculinizing toetra, noho izany antony izany dia malaza sy ampiasain'ny vehivavy izay mikatsaka indrindra ny hampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana.
Ny vokatra hafa izay tsikaritra ihany koa mandritra ny fampiasana Primobolan dia ny fitomboan'ny tanjaka voajanahary, ary ny fanatsarana ny fiaretana ara-batana amin'ny ankapobeny, izay afaka manatsara ny fiofanana amin'ny ankapobeny.
Na dia eo an-tsena aza ny Primobolan azo tsindrona, ny vava indrindra amin'ny fampiasana an'io steroid io dia amin'ny vava.
Amin'ity tranga ity, dia misy ny fahaverezan'ny fifantohana bebe kokoa mifandraika amin'ny tsindrona, izay miteraka fiakarana ny vola atolotra isaky ny milligram am-bava mba hahazoana io vokatra io ihany.
Ny dosie izay ampiasain'ny lehilahy amin'ny ankapobeny dia miovaova eo anelanelan'ny 300 sy 600mg isan-kerinandro ao amin'ny kinova tsindrona, ary ho an'ny kinova am-bava, ny ambaratonga voatondro dia 70 ka hatramin'ny 100mg isan'andro ho an'ny lehilahy.
Ho an'ny vehivavy, ny doka mahazatra indrindra dia manomboka amin'ny 100 ka hatramin'ny 200mg isan-kerinandro amin'ny kinova tsindrona ary manodidina ny 25 ka hatramin'ny 75mg isan'andro ao amin'ny kinova am-bava.
Na eo aza ny zava-mahadomelina izay miteraka tsy fahasimban'ny metabolisma amin'ny atiny, dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 8 herinandro ny faharetan'ny tsingerin'ny Primobolan.
Satria anabolika izay tsy 17 Alpha Alquelate, ny fiatraikany ratsy amin'ny vatana dia kely kokoa noho ny steroid hafa toy ny Stanozolol.
Jereo ny lisitra eto ambany raha te hahita ny vokany mahazatra indrindra sy ny faritra misy ifandraisany:
Toetra mampiavaka ny masculinizing: na dia tsy dia matetika loatra aza, rehefa ampiasain'ny vehivavy, ny Primobolan dia mety hiteraka vokan'ny androgenika amin'ny vatana, toy ny fiovan'ny feo, ny fitomboan'ny volo, ny fanitarana ny clitoris, ny fihenan'ny volo ary ny hafa.
Mony: Mety hitombo ny menaky ny hoditra ary vokatr'izany dia mitombo ny isan'ireo mony manerana ny vatana.
Fiovan'ny mombamomba ny lipida: Mandritra ny tsingerin'ny Primobolan, dia mahazatra ny fiovan'ny kolesterola, na ny fihenan'ny kolesterola tsara (HDL) na ny fiakaran'ny kolesterola ratsy (LDL)
Fanakanana ny axis hormonal: na dia somary ambany aza ny famoretana ny axis hormonal, io anabolika io dia mety hampihena ny famokarana testosterone voajanahary
Amin'ny ankapobeny, ny voka-dratsy mifandraika amin'ny fampiasana Primobolan dia ambany raha oharina amin'ny fanafody hafa, na izany aza, ilaina ny fitandremana amin'ny fampiasana azy sy ny TPC sahaza azy (fitsaboana post-cycle).
Ahoana ny fomba hanangonana kitapo Primobolan?
Mba hahafahanao mahita protokol mety mifanaraka amin'ny antsipiriany rehetra tafiditra amin'ny tsingerina izay mampiasa Primobolan ho fototra, ny fanampiana ara-pahasalamana dia tokony hotadiavina miaraka amin'ny endocrinologist matihanina.
Ity matihanina ity ihany no afaka mamantatra ny vokany sy ny fomba fampiasana azy isan-karazany, miaraka amin'ny fitambaran'ny zava-mahadomelina hafa hahafahana mahazo ny vokatra hatsarana irina.
Ankoatr'izay, ny fisorohana ny fahasalamana dia tena zava-dehibe mandritra ny tsingerina, na dia Primobolan aza dia steroid anabolika tsy dia misy vokany manimba, ny fanaraha-maso ara-pahasalamana dia ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny vatana aorian'ny fampiasana ny vokatra.
Mendrika ampiasaina Primobolan ve?
Ity dia steroid anabolika izay misy tombony lehibe kokoa ho an'ny mpihaino vehivavy, indrindra noho ny vidiny avo lenta raha oharina amin'ireo safidy hafa eny an-tsena.
Ny fampiharana ny fampiasana lahy dia miasa bebe kokoa amin'ny teboka iray izay afaka manampy amin'ny fifandanjana eo amin'ny anabolika hafa mba hampihenana ny dingan'ny aromatization, fa tsy hampiroborobo ny fahaizan'ny anabolika lehibe.
Ny fampiharana azy dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fizotran'ny fanapahana, noho izany, ny tsingerina atao mba hampitomboana sy hanafainganana ny fandoroana tavy amin'ny vatana dia azo hatsaraina miaraka amin'ny fisian'ny Primobolan.
Teboka iray hafa tokony hodinihina ny fahombiazan'ny fanafody, satria lafo ny vidiny na amin'ny endriny am-bava na amin'ny tsindrona.
Manampy amin'ny fihenan-danja ve i Primobolan?
Eny. Ny iray amin'ireo endrika mahavariana indrindra amin'ity steroid anabolika ity dia ny fahafahany manampy amin'ny fihenan-danja amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny metabolisma sy ny fitazonana ny hozatra.
Izany hoe, na dia manery ny vatana handoro tavy haingana aza izy io, dia misy ny fihenan'ny katabolisma hozatra mandritra ny fotoana anaovana azy.
Ho fanampin'izany, ny fampiasana angovo tsara indrindra dia mikendry indrindra ny fitazonana ny hozatra, izay manatsara ny fandoroana ny tavy amin'ny fomba haingana sy azo antoka kokoa.
Aiza no hividianana Primobolan?
Ny kinova am-boalohany an'ity anabolika ity dia sarotra be ihany, satria kely ny famokarana azy ary any amin'ny firenena manokana ihany no anaovana azy.
Ny fampiasana Primobolan dia vita amin'ny alàlan'ny fanaovana varotra ataon'ireo laboratoara "ambanin'ny tany" izay mety misy tranga ambanin-javatra ary koa fanitsakitsaham-bady ao amin'ilay raikipohy.
Tena zava-dehibe ny fiheverana an'io amin'ny tsingerina natao tamin'ity steroid anabolika ity, satria tena avo lenta ny fisandohana sy ny fanitsakitsaham-bady.
Ny toetra mampiavaka ny Primobolan
Fandikana am-bava: estera acetate;
Dika azo tsapain-tanana: ester enanthate / propionate;
Lanja molekiola fototra: 302.4558;
Molekular lanjan'ny acetate: 60.0524;
Molekular lanjan'ny enanthate: 130.1864;
Teboka mitsonika: tsy voafaritra;
Fatra mahomby (am-bava): (Lehilahy) 100-200mgs / andro; (Vehivavy) 10-25mgs / andro;
Fatra mahomby (tsindrona): (Lehilahy) 350-600mgs / herinandro; (Vehivavy) 100mgs / herinandro;
Half-Life: 10-14 andro (tsindrona); 4-6hrs (am-bava);
Fotoana hamantarana: 4-5 herinandro;
Fampitahana anabolika sy androgenika: 88: 44-57.
Primobolan dia zava-mahadomelina misy potika anabolika ambany ary tsy dia azo ampiharina amin'ny fampiasana lahy, izay ampiasain'ny vehivavy tsara kokoa satria ny vatana vehivavy dia mora tohina kokoa mifandraika amin'ny hormonina lahy.
Ny fampiharana tsara indrindra an'ity mpitsabo anabolika ity dia mifandraika amin'ny fikojakojana ny hozatra ary koa ny fandoroana ny tavy amin'ny vatana, satria ambany dia ambany ny mety anabolika raha ampitahaina amin'ny fanafody hafa.
Izy io dia zava-mahadomelina izay manana vesatry ny voka-dratsy ary koa tsy manana poizina ambony amin'ny atiny, na izany aza, manana vidiny lafo izy io ary misy fahasahiranana kely azo amin'ny alàlan'ny loharano tena azo itokisana, izay mety hametraka anao matetika atahorana ny fampiasana Primobolan ao anaty tsingerina.